DIN PN16 12 इंच पाइप कार्बन स्टील प्लेट Flange निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Aiguo
घर > उत्पादनहरू > फ्ल्यांज > प्लेट फ्ल्यांज > DIN PN16 12 इंच पाइप कार्बन स्टील प्लेट Flange
हामी DIN PN16 १२ ईन्च पाइप कार्बन स्टील प्लेट flange प्रदान गर्न सक्दछौं। १ 1992 1992 २ मा स्थापित, हामी चीनमा राम्रो प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू, ग्यारेन्टी डिलिभरी समयको साथ एक पेशेवर फ्ल्यांज निर्माता हो।
१. DIN PN16 १२ ईन्च पाइप कार्बन स्टील प्लेट flange को परिचय।
हामी २0० श्रमिकहरू, 00०००० m2 कार्यशाला, १ 15०० टन मासिक आउटपुट, २ years बर्ष उत्पादन अनुभव, वितरण समय ग्यारेन्टी, आईएसओ, TUV / PED, DNV, BV, VD-TUV प्रमाणितको साथ फ्यान्ज उत्पादन केन्द्रित छौं, यी हुन् हामी कसरी राम्रो गुणस्तर राख्छौं र विश्वव्यापी मूल्यवान ग्राहकहरूका लागि प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू। हामी DIN PN16 १२ ईन्च पाइप कार्बन स्टील प्लेट फ्ल्यांज उत्पादन गर्छौं जुन हाम्रो ग्राहकको आयाम, सतह समाप्त, मार्किंग, प्याकिंग आदि आवश्यकताहरूको अनुसार छ।
२. DIN PN16 १२ ईन्च पाइप कार्बन स्टील प्लेट flange को विशिष्टता।
उत्पाद नाम: DIN PN16 १२ ईन्च पाइप कार्बन स्टील प्लेट flange
D. DIN PN16 १२ ईन्च पाइप कार्बन स्टील प्लेट flange को योग्यता।
D. DIN PN16 १२ इन्च पाइप कार्बन स्टील प्लेट flange को प्याकिंग।
हामी प्लाईवुड प्यालेटहरू, प्लाईवुड केसहरू वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार प्याक फ्ल्यांगेहरू आपूर्ति गर्न सक्दछौं। विशेष प्याकेजि also पनि उपलब्ध छ, जस्तै धूमन काठको फूस र काठका केसहरू। हामी धेरै वर्षदेखि फ्यान्ग निर्यात गर्छौं र हामीले कहिले पनि प्याकिंगको साथ कुनै समस्या भेट्दैनौं। .Reliability हाम्रो मजबूत पोइन्ट छ।
प्रश्न: तपाईं कारखाना वा ट्रेडिंग कम्पनी हो?
A: हामी एक कारखाना हो।
प्रश्न: के तपाईंको कम्पनीसँग निर्यात लाइसेन्स छ?
A: हो, हामीसँग9बर्ष भन्दा बढि निर्यात अनुभव छ, हामी FOB, C&F, CIF, EXW ETC गर्न सक्छौं।
A: तपाईं हाम्रो ईमेल ठेगानामा ईमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंको सन्दर्भको लागि क्याटलग र हाम्रा उत्पादनहरूको तस्बिरहरू प्रदान गर्नेछौं। हामी सबै मानक जाली फ्ल्यांगहरू आपूर्ति गर्न सक्दछौं, यदि ड्राइंग प्रदान गरियो भने गैर-मानक र विशेष फ्ल्याजेस पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ।
प्रश्न: डेलिभरी समय कति हो?
एक: यो मात्रा अनुसार छ। सामान्यतया, २ tons टन भित्र आदेश को लागी, उत्पादन समय भुक्तान प्राप्त पछि १ 15-२5 दिन हो।
हट ट्याग: DIN PN16 12 इंच पाइप कार्बन स्टील प्लेट निकलान, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, स्टक मा, नि: शुल्क नमूना, अनुकूलित, चीन, चीन मा निर्मित, छुट, कम मूल्य, मूल्य सूची, TUV, गुणवत्ता